यसरि भयो मध्यरातमा समाजवादी र राजपाको पार्टी एकता:: Mero Desh
यसरि भयो मध्यरातमा समाजवादी र राजपाको पार्टी एकता
Published on: १० बैशाख २०७७, बुधबार २३:५१
काठमाडौं । समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच पार्टी एकताको सहमति भएको छ । नयाँ पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ रहने छ भने झण्डा समाजवादीको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रंगको बीचमा तारा हुनेछ । चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुनेछ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरदसिंह भण्डारीको निवासमा बुधबार साँझ भएको वार्तामा भएको सहमतिमा दुवै पार्टीका चार–चार जना नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् । पार्टी एकता समानताको आधारमा हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएका समाजवादी र राजपाका शीर्ष नेताहरु । तस्वीर : विश्वदीप पाण्डेको फेसबुक
सरकारले सोमबार मात्र पार्टी फुटाउन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो र समाजवादी पार्टीको एउटा समूह अलग गराउन चाहेको थियो । त्यसलाई रोक्ने प्रयाससँगै दुई दलले एकता वार्तालाई टुंगोमा पुर्‍याएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार नेतृत्वको विषय टुंगिएको छैन । तर दुवै पार्टीका नेताहरुले यसमा समस्या नहुने बताएका छन् ।अहिले समाजवादीमा संघीय परिषदको अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् भने राजपामा ६ जना अध्यक्ष मण्डलका सदस्य छन् ।
शि’र्ष ने’ताहरु तनावमा। सबै दौ’डमा छन २० मन्त्री क’सलाई बनाउने?
जम्मा २० मन्त्रीका लागि १५६ सांसद दौडमा, शिर्ष नेतालाई चु’नौती
राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने षड्यन्त्र नगर्न देउवा–प्रचण्डलाई महेश बस्नेतको चेतावनी, एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याईए देशभरि आगो बाल्ने।भिडियो सहित)
२० मन्त्रीका लागि १५६ सांसद दौडमा, शिर्ष नेतालाई चुनौती
अनेरास्ववियु र युवासंघ जस्ता संगठनलाइ ओझेलमा पार्न खोज्ने युथ फोर्स ब’हुबली समुहलाइ खा’रेज गर्न योगेश भट्टराई को अ’नुरोध